Mogadishu Journal » Jeneral Thomas oo banaynaya jagada Taliyaha Ciidanka Maraykanka ee Qaaradda Afrika
Mjournal :-Jeneral Thomas David Waldhauser ayaa la filayaa inuu xilkaasi ka dego, sida ay sheegeen Saraakiil Maraykan ah.
Jeneralka oo 66-jir ah waxa uu Hawlaha Ciiddamadda ku soo biiray sannadkii 1976-dii, isagoo ka tirsanaa Ciiddanka Mariniska ee dalkaasi, wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay Talisyadda Milliteriga Maraykanka, isagoo ka qeyb galay Hawlgalo Milliteri ee xilka looga tuuray Madaxweynihii hore ee dalka Iraq, Marxuum Saddaam Xuseen.
Jeneral Thomas David Waldhauser waa Taliyihii 4-aad ee soo mara Taliska Ciiddanka AFRICOM ee ay Xaruntiisa ku taallo magaalladda Istutgarat ee dalka Jarmalka.
Waxaana Xilkaasi loo magacaabay bishii July 18-dii ee dannadkii 2016-kii, iyadoo Ku-xigeenkiisa laga dhigay Jeneral Aleskandar Laskaris.
Jeneral Thomas David Waldhauser oo deggaan ahaan ka soo jeeda magaalladda Saynt Pawl ee Gobalka Minnosata ee dalka Maraykanka waxa uu isbuucii hore hor tegay Guddiga Senedka Mraaykanka ugu qaabilsan Arrimaha Adeegga Ciiddamadda, isagoo faahfaahin ka siiyey Hawlgalladda AFRICOM ka wadaan dalal ay Somalia ka mid tahay.
Taliyaha Ciiddanka AFRICOM ee xilka ka sii degayo, Jeneral Waldhauser waxa uu ka shanqariyey inaan Duqeyn Diyaaradeed oo keliya looga guuleysan karin Hawlgalladda ka dhanka ah Dagaalamayaasha Alshabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuuna sheegay in lama huraan tahay inay Ciiddanka DFS kaalintooda ka qaataan Hawlgalkaasi,wuxuuna qiray inay Duqeymahaasi geystaan dhibaatooyin